EcubWare 4.2.1 Chinyorwa - Jinhua Ecubmaker Technology Co, Ltd.
Software Operation Chinyorwa
1.System Nharaunda Kuisirwa Uye Kutanga
1.1 Kumhanya Nharaunda
1.2 Isa OpenGL
1.3 Isa NET Sisitimu 3.5
1.4 gadza EcubWare
2.FDM 3D Kudhinda Basa
2.1 Kutanga kweInternet
2.2 Menyu Bar
2.3 Printer Management
2.3.1 Kutanga Shandisa EcubWare
2.3.2 Sarudza Printer kubva Menyu
2.4 Model Kunze
2.4.1 Tumira Muenzaniso neMain Menu
2.4.2 Tumira Muenzaniso neTuru Menyu
2.4.3 Tumira Muenzaniso neMouse Dhonza
2.5 Muenzaniso Parameter Zvirongwa
2.6 Paramende Kuisa Kudhinda
2.6.1 Yakakurudzirwa Zvirongwa
2.7 Kuchekesa Uye Sevha
2.8 Right Mouse Bhatani Rinoshanda
2.9 FDM Imwe Ruvara 3D Kudhinda
2.10 FDM Dual-Ruvara 3D Kudhinda
3.Raser achiita zvokutemera Rinoshanda
3.1 Vhura Laser Rinoshanda kubva kuMenu
3.2 Yakatsigirwa Image Fomati
3.3 Nhanganyaya yeInternet
3.4 Yakatsigirwa Image Fomati
3.5 Nhanho nedanho Export Maitiro
3.6 Dhinda Yekumhanyisa Yakakurudzira Yekukosha Runyorwa
4. CNC Kuveza Basa
4.1 Vhura CNC mashandiro kubva kuMenu
4.2 Chikamu cheBasa
4.3 Ngenisa Vector
4.4 Tumira Bitmap
4.5 Tumira Gcode
4.6 Gadzira Tsika Tsika
4.7 Gadzira Chimiro
4.8 Gadzira Embossed
4.9 Matambudziko Uye Mhinduro
4.9.1 Vector Faira Haigone Kuvhurwa
4.9.2 Gcode Yakagadzirwa neBitmap Faira Ine Border
5.1 Chinse kuChirungu
5.2 Chirungu kusvika kuChinse
"Ecubware" is a multi-functional software iyo inosanganisira FDM 3D Printing function, Laser Engraving Function uye CNC yekuveza basa. Yese software inogadzirwa faira (*. Gcode) inowanikwa ye TOYDIY mamodheru akagadzirwa neEcubMaker, iyo modhi yekushandisa ine zvakwakanakira kushandura kuri nyore kweanoshanda ma module, yekumhanyisa slicing kumhanya uye inonzwisisika nzira yekugadzira, uye iro simba basa rekuona kwakazara kweiyo 3d modhi. uye nzira yekushandisa.
Mahwindo anomhanya nharaunda: Windows 7 kana pamusoro.
Network yekubatanidza: Networking yakakurudzirwa
Graphics kadhi: Tsigira OpenGL
OpenGL iri yemuchinjikwa-mutauro, muchinjika-chikuva application programming interface yekupa 2D uye 3D vector Graphics. Yakashandiswa kudhirowa akaomarara mativi-matatu mativi kubva nyore primitives. Kana pasina"Opengl 2.0" kana pamusoro pekutyaira kadhi yemifananidzo pakombuta yemushandisi, zvinokanganisa kuvhurwa uye kushandiswa kweiyo EcubWare software. Kazhinji, iyo default kuratidza adapter vhezheni yakaderera mushure mekunge system yaiswa, sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera.
Sarudza adapta yekuratidzira (default kuratidza mushure mekuisirwa system: Microsoft basic display adapter)
Pasina mutyairi weOpenGL, kukanganisa kunotevera kunoitika kana uchimhanya software yeEcubWare.
Gadziridza iyo giraidhi mutyairi. Inotevera ndiyo nzira yekugadzirisa dambudziko.
Fambisa mbeva ku "Tsvaga pawebhu neWindows"
Inzwa Zvinotaurwa "mudziyo Manager"
Pop up "mudziyo Manager"
Sarudza "Ratidza maadapter" uye "Microsoft Basic Ratidza Adapter"
（Default kuratidza mushure mekuisirwa system："Microsoft Basic Ratidza Adapter"）
Kona-kurudyi kuti uvandudze mutyairi
(Iyo komputa inoda kuve yakabatana neInternet)
tinya "Tsvaga otomatiki kuti uvandudze software yekutyaira"
Kutsvaga pamhepo kune software ...
Kudhaunirodha mutyairi software mushure mekuwanikwa
Kuisa mutyairi software mushure mekuburitswa
Iyo yekumisikidza yakabudirira uye rakakodzera giraidhi kadhi zita rakaratidzwa
Wobva watarisa kuti uone kana software yacho yakavhurika nemazvo
Kana iwe ukavhura zvakanaka, dambudziko rakagadziriswa. Kana ikatadza kuvhura, pamwe nekuti kadhi yemifananidzo haitsigire OpenGL kana rimwe dambudziko rekuenderana.
Kana NET Sisitimu 3.5 kana pamusoro isina kuiswa, zvinotevera zvinomuka paunomhanya Laser Rinoshanda Software , sezvakaratidzwa pasi apa
Isa iyo NET Sisitimu 3.5 uye pamusoro nesarudzo 2: Kana komputa yako ichibatana neinternet, Dzvanya "Dhawunirodha uye gadza ichi chinhu" sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pamusoro. Mushure mekubaya, chinotevera chinzvimbo chichaonekwa kusvika kumagumo kwekumisikidza.
Nhanho 1: tinya kaviri iyo yekuisa package， Faira unozviburitsa ……
Ichaongorora zvinhu zvitatu, Kukundikana kwega kwega kunoguma nekusaita kushanda kweEcubWare software. Kana cheki ok, unogona kudzvanya "Inotevera Nhanho", kana tinya "Darika Pamusoro" kune inotevera nhanho.
Nhanho 2: Mushure mekumisikidza nzira, tinya zvinotevera
Nhanho 3: Dzvanya zvinotevera
Nhanho 4: Sarudza zvaunoda kuisa. Kana uku kuri kwekutanga kuiswa, sarudza dzese sarudzo dzinofanirwa kuiswa. Wobva Wadzvanya "Isa"
Dhindaini huru inoshandiswa mune iyi module inosanganisira TOYDIY 4in1 3D Printer（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead、FANTASY PRO4 uye TOYDIY 4in1 3D Printer 2.0（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead）
Iyo huru interface inosanganisira "Menyu Bar", "Paramueter yekumisikidza bar", "Tarisa Bhar" uye "Model Paramu yemidziyo yekushandisa". Iwe unogona kushandura ruzivo rweprinta mune iyo Menyu bar uye vhura iwo marongero ehunyanzvi. Iyo paramende yekumisikidza nzvimbo ndiyo Main inoshanda nzvimbo, uko mushandisi anopinda akasiyana parameter anodiwa pakucheka uye inogadzira iri nani G-Code faira zvichibva pane izvi parameter. Nzvimbo yekutarisa inonyanya kushandiswa kuona mamodheru, isa mamodheru, mamodheru emabatiro, preview slice nzira, tarisa mhedzisiro yezvikamu.
Basa racho rinonyanya kusanganisira kuvhura uye kusevha modhi faira, kuisa paramende, kuwedzera modhi, rubatsiro uye zvichingodaro.
Kekutanga iyo EcubWare painovhura, iyo "Wedzera Printer" dialog bhokisi rinowoneka. Sezvinoratidzwa pazasi, sarudza zita remudhindiri rinoenderana neyaunoda musoro wemidziyo. Izvo zvisipo ndeye "TOYDIY 4in1 FDM ToolHead" (FDM chishandiso musoro).
Vhura iyo software interface, mumenyu huru, "Wedzera maPrinta", wedzera purinta yaunoda.
Iyo software ine dzakasiyana nzira dzekupinza iyo modhi, vashandisi vanogona kusarudza kupinza mamodheru zvinoenderana nezvinodiwa.
“Faira "-" Vhura Faira (ma) "
Tsvaga iyo yekushandisa kuruboshwe kuruboshwe rwe software ，pakati,
Kunze modhi. Unogona kurodha 3d mamodheru mune akasiyana mafomati, senge stl, obj, Dae, uye AMF. Kana iwe unogona kushandisa iyo Load modhi Faira kubva kuFaira menyu, kana iwe unogona kushandisa CTRL + l. Takura ikamera faira, uye software inogona kuita shanduko kune iyo modhi, senge shanduro, kutenderera, kuyera, mirroring.
Shanyira iyo yepamutemo webhusaiti. Rumwe ruzivo runogona kutorwa pasi kubva kumba peji.
Muenzaniso download. Pane peji, iwe unogona kurodha pasi mamwe *. modhi mafaera mu * .STL fomati
Kuti upinze modhi, tinya pane modhi yakachengetwa pakombuta yako uye dhonza iyo modhi mune huru interface yeEcubWare.
Zve kuvandudzwa kwemhedzisiro yekudhinda mhedzisiro, iyo modhi inoda kuchinjiswa kune yakakodzera chinzvimbo uye saizi. Vashandisi vanogona kuita izvi nekushandisa iyo "Model Parameter toolbar" ..Heano maitiro anoshanda：
Fambisa: Iyo yekutarisa iri munzvimbo yekuona ndiyo yekudhinda chikuva nzvimbo. Dhinda uye ubatisiseKuruboshwe Mouse Bhatani kumuseve uye fambisa Kumusoro-Kuderera, Kuruboshwe-Kurudyi kumisazve Modeli yako paPlatform. Shandisa Press uye BataRight Mouse Bhatani kutenderera chikuva chose. modhi inogona kuiswa chero munzvimbo. ShanduraMouse Wheel ku Zoom-In, Zoom-Out iyo modhi kuti uone iwo mamiriro ekuona.
Chiyero: Model Scaling Shanduko, isa yakaringana chiyero muzana. Kana iyo modhi ikasarudzwa, tinya bhatani reScale uye iwe uchaona matatu materu pane yemhando yepamusoro inomiririra X, Y, uye Z axes. Dzvanya uye dhonza bhokisi kuyera iyo modhi neakawanda akawanda. Iwe unogona zvakare kuisa zoom factor mune zoom yekuisa bhokisi, iro bhokisi kurudyi kwe "Scale *". Iwe unogona zvakare kuisa iyo chaiyo Saizi kukosha mubhokisi reSizeji yekuisa, rinova iro bhokisi kurudyi kwe "Saizi *", uchiita shuwa kuti iwe unoziva kuti ndeapi mapimo anomiririra modhi pane imwe neimwe axis. Uye zvakare, kuyera kwakakamurwa kuve"Uniform kuwedzera" uye "Non-yunifomu kuwedzera" iko kushandiswa kwekusarudzika kweiyunifomu kuyerwa, ndiko kuti, menyu yekuyera munzvimbo yekukiya. Kuti ushandise Non-yunifomu kuyera, ingotinya pane iyo lock. Kuwedzera-yunifomu kuyera kunogona kushandura cube kuita cuboid. Reset inodzosera iyo modhi kune yayo yekutanga chimiro, uye KunaMax anokwenenzvera modhi Kusvika kune yakakura saizi iyo purinda inogona kudhinda.
Tenderera: Dzvanya Rotate, uye iwe uchaona zvindori zvitatu pamusoro peiyo modhi, iwo mavara akatsvuka, girini, uye bhuruu, anomiririra X, Y, uye Z matemo. Isa mbeva pamhete, Right tinya pinda uye kudhonza kunogona kuita iyo modhi kutenderedza inoenderana axis kutenderera kweimwe kona, zvakakosha kuti uzive izvo zvinongobvumidza vashandisi kutenderera ka gumi nekona kona. Kana iwe uchida kudzokera kunzvimbo yepakutanga, unogona kudzvanya bhatani reReset pane iyo Spin Menyu. Iyo Lay bhatani bhatani inongoerekana ichitenderedza iyo modhi kune yakatsetseka nzvimbo pazasi, asi haina kuvimbisa kubudirira nguva dzese.
Girazi: Dzvanya pamiseve mina kana mifananidzo miviri yakasvibirira kuti uone girazi rekutanga. Kana iyo modhi ikasarudzwa, tinya bhatani reMirror kuti Mirror iyo modhi pamwe chete neX, Y, kana Z axes. Semuenzaniso, iyo yekuruboshwe-ruoko modhi inogona kuratidzwa kune yekurudyi-modhi.
Dhinda paramende marongero akapatsanurwa kuita "Yakakurudzirwa" uye "Tsika" paramende marongero.
"Yakurudzirwa" inogona Kunzwisiswa seyakagadziriswa paramende. Pinza iyo modhi uye ita yemhando paramende marongero wobva wadzvanya "Slice" kuburitsa iyo Gcode. Hapana kudikanwa kwekumwe kuchinjika pane yako Dhizaini Setup. Iyo Software iri pane yakasarudzika mamiriro.
Kuti usarudze purinda, iyo inodhinda mune inodonhedza menyu inofanirwa kuwedzerwa kuburikidza nemenyu huru "Wedzera Mushini", kana isingazoratidzwe.
Mashoko. Izvo zvisipo zvinhu "PLA-T200". Zvinhu zvakasiyana zvine zvivakwa zvakasiyana. Kana iwe uchida kuwedzera mhando yemhando, unogona kudzvanya, wobva wadzvanya "Management Material ...", shandura zvinhu zvitsva, shandura ruzivo rwezvinhu, mapurinda edhizaini, nezvimwe.
：0.1 uye 0.2, purinda mhedzisiro yekumisikidza, sarudza nekukweva iro dema dema negonzo. Iyo nhamba inomiririra kukwirira kwedenga rega rega. Iyo diki iyo nhamba mune sarudzo, iyo yakanakisa iyo yekudhinda, uye iyo yakareba iyo nguva yekudhinda. Kazhinji, 0.2, kana 0.2 mm kukwirira, ndiyo inokurumidza kumhanyisa kumhanya.
：Zadza kumisikidza. Dhonza iro dema dema negonzo kuti uwane saizi yemutengo. Gadza chiyero chekuzadza zvinoenderana nezviri kudikanwa chaizvo, kana zvisiri zvekutakura, yakatarwa yekuzadza chiyero che20%.
Bvumira Gradient: Kana ikabvumidzwa, huwandu hwekuzadza hunowedzera zvishoma nezvishoma sekukwirira kwekudhinda.
: Zvimwe zvimiro zvisina kujairika zvinoda kutsigirwa kuti zvirinani kudhinda. Kana ikasashandiswa, iyo protrusion inodonha. Kuisarudza ichagadzira chimiro chekutsigira pasi peiyo modhi kudzivirira iyo modhi kubva mukuzeya kana kupurinda mumhepo.
：Inowedzera nzvimbo yakati sandara yakatenderedza kana pazasi pechinhu chinogona kudimburwa nyore nyore. Kana iyi sarudzo ikaongororwa, iyo Raft basa inogoneswa. Kana isina kuongororwa, hapana substrate. Iwo akasarudzika paramende marongero akagadziriswa muchikamu chinotevera, "Dhinda Parameter Zvirongwa.".
Tsika paramende rondedzero, iyo yekuratidzira yakasarudzika inowanzo shandiswa parameter, kune mamwe paramende marongero, ndapota tinya ma parameter padyo nekadiki bhatani giya, sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera.
Iko kune "Slicing" bhatani mukona yezasi yekona yeiyo huru interface. Mushure mekumisikidzwa kwezvikamu, iwo mameseji mamiriro acharatidza iyo "slice", yekukurumidza bhatani. Inoti "slicing ..." iri kuenderera mberi, uye kana yapera, inokuudza iwe zvinhu zvakawanda zvauchazoshandisa, mumamita (m), uye mu gramu (G) yezvinhu.
Mushure mekunze iyo modhi, unogona kubaya pane iyo modhi, wobva wadzvanya kurudyi mbeva bhatani, pop-up kurudyi-tinya basa, zviri nyore kushandisa iyo modhi. Mabasa acho anotevera:
Center Sarudzo Muenzaniso: Mushure mokunge modhi yashandurwa, yawedzerwa, yakadzoreredzwa uye mamwe mashandiro, iyo modhi haisi iyo iri pakati pepuratifomu, tinya iyi sarudzo kuti iite modhi yepakati kuratidza.
Delete Selected Model: Delete iyo modhi yakasarudzwa nebhatani repamabhatani.
Wakawanda Wakasarudzwa Muenzaniso: Kopa iyo modhi yakasarudzwa nebhatani repamabhatani.
Sarudza All Models: Sarudza mamodheru anowanikwa papuratifomu. Bvisa Vaka Plate: Bvisa zvese mamodheru papuratifomu.
Rodha zvekare mamodheru: Kana iwe uchikanganisa kudzima modhi kubva papuratifomu yako, unogona kushandisa chiitiko ichi kudzoreredza modhi yakadzimwa papuratifomu uye woionesa zvakare.
Mhando dzeboka: sarudza mamodheru akati wandei muboka kuti zvive nyore kufamba uye kuyera pamwechete.
Unganidza Models: Kubatanidza mhando mbiri dzakasarudzika kuita kamwe chete, kunyanya kune maviri-mavara ekudhinda. SPLIT MUENZANISO: SPLIT Iyo yakasanganiswa modhi.
Mukudhinda-kamwe-kweruvara, pane mhando imwe chete yezvinhu paprinta, uye rutsigiro kana chikuva chakanamatirwa kuchinhu chakafanana. Matanho ekucheka chidimbu chimwe chezvinhu anotevera:
Nhanho 1: Sarudza purinda
Nhanho 2: Tumira iyo modhi
Nhanho 3: Seta parameter kana pasina zvakakosha zvinodiwa, izvo zvekudhinda parameter zvinogona kuva.
Nhanho 4: Kuchekesa uye Sevha
Iyo "Slicing" mukona yepazasi kurudyi yesoftware interface, sanisa iyo modhi, mushure mekugadzirisa, tinya "Sevha kuFaira", iyo GCODE faira rakagadzirwa richachengetedza ku diski.
Nhanho 3: Set parameter
Sarudza imwe yemamodeli uye tinya-kurudyi pane "Extruder 1:"
Sarudza imwe yemamodeli uye tinya-kurudyi pane "Extruder 2"
Nhanho 4: Unganidza iyo modhi
Kurudyi Dzvanya kusarudza ese mamodheru
Kurudyi tinya uye sarudza "Unganidza Muenzaniso"
Dzvanya modhi uye tinya-kurudyi kusarudza "Center Sarudzo yeModheru"
Nhanho 5: Kuchekesa uye Sevha
Padanho rapfuura, tinya "Kuchekesa" mukona yepazasi kurudyi yesoftware, uye wobva wadzvanya "Sevha kuFaira" kuchengetedza iyo yekucheka nzira yekucheka kudiski
Sarudza "Laser ToolHead"
Sarudza ”Ehe” kuvhura EcubMakerLaser
Mufananidzo unotsigirwa weSoftware iyi ndewekuti: *. BMP, *. JPG, *. Png.
①：Main menyu. "Faira" menyu inosanganisira kupinza mafaera emifananidzo, kuvhura ekupedzisira akavhura mafaera uye kusevha 'Gcode'; "Mutauro" inogona kuchinjiswa pakati peChinese neChirungu, uye kutanga zvekare mushure mekuchinja; "Zvimwe" menyu yakakamurwa kuita "online rubatsiro," webhusaiti yepamutemo "uye" sub-menyu ".
Yakakwira Hunhu Bicubic: Inokodzera zvese kuwedzeredza uye kudzikisira, gadzira yakatsetseka mifananidzo inosanganisa pixels.
Muvakidzani Ari Pedyo: Chengetedza mitsetse yakaoma kuyera chifananidzo pasina kutsvedza chero pixel.
Grayscale uye RGB inotsvedza. Kana iwe ukavhura mufananidzo wakavezwa, kutendeuka kubva pavara kuenda ku grayscale kunodiwa. Iwe unogona kusarudza pakati peyakafanorongedzwa ruvara kune grayscale fomula (Rakareruka Avhareji, Kurema Avhareji kana Optical Yakajeka) kana sarudza iyo "Tsika" sarudzo uye nemaoko tsanangura kutonga kwechimwe nechimwe RGB chinhu.
Chekutanga HQ Bicubic Muvakidzani Ari Pedyo
“Tsika”Inobatsira pakutenga mifananidzo yakajeka yakadai se clipart, uye tinoda kudzora rima / kureruka kwemuvara wega.
Kupenya, Kusiyanisa uye BW chikumbaridzo. Nekupenya uye kupesana iwe unogona kusviba kana kujekesa mufananidzo, pamwe nekuwedzera musiyano.
Uine BW sarudzo iwe unogona kumisa chikumbaridzo pamufananidzo: mapikiseli akajeka echikumbaridzo anozotorwa semuchena, kusviba kuita nhema.
Zvese izvi sarudzo zvinokanganisa mashandisiro anoita maturusi emufananidzo uye nekugadzira mhedzisiro. Sezvo zvinhu zvakasiyana zvichizvibata zvakasiyana kana zvakanyorwa neraser, zvakakosha kuti utambe nesarudzo idzi kuti uwane mubatanidzwa wakanakisa wemhedzisiro yaunoda.
③：Na "mutsara kumutsara" chishandiso iwe unogona kunyora zvemhando yepamusoro mifananidzo ine chaiyo shades ye grey. Ziva kuti hazvisi zvese zvekunyora zvinoenderana nemaitiro aya: zvimwe zvinhu hazviite zvine mutsetse nesimbi yemagetsi magumo zviripo chete sekutsva kana kusapisa nyika zvichiita kuti zviome kubereka greycale. Muzviitiko izvi tinokurudzira kushandisa "Dithering" chishandiso.
④：Laser yekunyora mirayiridzo inogona kusarudzwa yakatwasuka, kureba uye zvisingaenzaniswi. Iyo yakakura kukosha kwehunhu ndeye, iwo akawanda mapoinzi ayo aanopa uye zviri nyore kuti ive carbonize. Naizvozvo, akasiyana maitiro anogona kumisikidzwa zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana. Kazhinji, iyo yakakurudzirwa tsika ndeye gumi mitsara / mm uye mishanu mitsara / mm yezvinhu zvehuni.
⑤：Gadzira yekumhanyisa kumhanya uye mufananidzo saizi. Iyo yekumhanyisa kumhanya ingangoita mazana matatu, iyo inogona zvakare kugadziridzwa zvinoenderana neicho chaicho chakayerwa chinhu. Iyo upamhi uye kukwirira zvinomiririra saizi chaiyo yekunyora.
：Ratera 90 ° kutenderera nguva ：Ratera 90 ° Kupikisa-wachi
：Flip mufananidzo yakatwasuka ：Flip mufananidzo yakamira
：Chirimwa mufananidzo ：Inver Ruvara
：Dzosera shanduko dzese
⑦Laser achiita zvokutemera Preview: Iyo yakanaka mhedzisiro yakati siyanei zvishoma kubva kuchokwadi. Mufananidzo wekutanga: kupinza yepakutanga mufananidzo
⑧：Graphic inoratidza nzvimbo
⑨Tumira: Tumira maficha emifananidzo; Slice: Shandura mifananidzo kuva gcode mafaira anozivikanwa nemuchina; Sevha: Sevha se gcode mafaera.
Bitmaps: * .bmp, *. Png, *. Gif uye * .jpg
Vector Girafu (Kugonesa): *. Svg
Kugadzika Carving Parameter：
Pakati pavo: "Hunhu" Iyo inopinza iyo poindi ndeyekuti, iyo yakakosha kukosha iri, iyo inonyanyisa iyo iratidziro iri, uye rejisita rezhinji kukosha iri gumi.
Kumhanya kwemhepo. Inomiririra kumhanya kwekumhanya kwemusoro we laser munzvimbo isina kuvezwa yemufananidzo.
Kuveza kumhanya: Inomiririra kumhanya kwekumhanya kwemusoro we laser munzvimbo yakavezwa. Iyo yakakurudzirwa kukosha yezvinhu zvinokanganisa hazvifanirwe kunge zvakanyanyisa.
Kugadzira zvinyorwa zvekunyora：
Kuveza kumhanya (mm / min)
Hunhu (mutsetse / m)
Iyi software inoshandiswa kuveza software ye TOYDIY modhi inogadzirwa neEcubmaker. Tsigiro yekuunza vector mepu, bitmap, Gcode preview.
Sarudza ”Cnc ToolHead ”
Sarudza ”Ehe” kuvhura EcubMakerCNC
①：Faira vhura bhatani. Vector girafu inotsigira kuvhura "*. SVG", "DXF". Mafaira eBitmap anotsigira "*. JPG", "*. JPEG" *. BMP "," *. GIF "," *. PNG ".
②：Gadzira mufananidzo. Iwe unogona kugadzira zvinyorwa uye zvakapusa maumbirwo.
③：Zoom mufananidzo. Kana x uye y akakura kudarika 180mm uye kunze kwehuremu hwepuratifomu, saizi yemifananidzo inoratidza yambiro tsvuku.
④：Shandura chimiro. Inotsigira 90 ° nenzira yakatarisa wachi, 90 ° anticlockwise, flip, yakatenderera girazi uye yakatwasuka girazi.
⑤：Zvirongwa zveparamende. Gadza chinyoro kumhanya, achiita zvokutemera udzamu uye Z vachisimudza kukwirira mushure nokuveza zvaitwa. Mushure mekumisikidza, tangazve iyo software kuti itange kushanda. Iko kuveza kumhanya kunokanganisa iyo yekuveza maitiro. Iko kuveza kumhanya kwakasiyana kwekuveza zvinhu kunogona kumisikidzwa zvakasiyana. Kazhinji, zvidiki, zvirinani, asi yakareba nguva yekuveza.
⑥：Zvekuratidzwa kwenzira isina chinhu, iyi sarudzo inofanirwa kutariswa kana uchipinza nekuchengetedza dhizaini, zvikasadaro kutemwa kunenge kusiri iko.
⑦：Graphic inoratidza nzvimbo. Nzvimbo yekutarisa.
Iwo akatsigirwa vector graph mafomati ari *. SVG uye *. DXF, asi kwete ese akatsigirwa vector magirafu anogona kuvhurwa. Inokurudzirwa kushandisa *. DXF mafaera.
Ongorora: Kazhinji, zvese zvinotsigirwa bitmap fomati zvinogona kuvhurwa, asi mamwe mabitmaps ane muganho wakavatenderedza mushure mekupinzwa mu software.
Pinda iwo mavara kuti agadzirwe iyi software haitsigire basa rekugadzira zororo, asi inopa chishandiso chekugadzira zororo, ndiko kuti, iyo fusion360 ye Autodesk kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa ku "fusion360 gadzira kodhi yekununura kero" uye "fusion360 gadzira dzidziso yekuyamura".
A. Matambudziko mumifananidzo (mutsara weruvara, wakanyorwa, nezvimwewo)
B. Chishandiso chinetso kugadzira vector faira.
Kazhinji neiyo bitmap faira pachezvayo kana matambudziko eruvara.
A. Tarisa uone kuti iyo showa yekufambisa nzira sarudzo yaongororwa here.
B. Edza iyo *. SVG fomati faira inouya neyekunze software. Kana iwe uchikwanisa kupinza iyo yakagadzirirwa mufananidzo zvakare.
5. Mutauro Kuchinja